अजय देवगनका कारण ४९ वर्षीया तब्बू अवि’वाहित ! कसरी जान्नुस – Online Khabar 24
अजय देवगनका कारण ४९ वर्षीया तब्बू अवि’वाहित ! कसरी जान्नुस
पुरा खबर हेर्नुस,
अभिनेत्री तब्बूले अभिनेता अजय देवगनकै कारण वि’हे न’गरेको बताएकी छन् ।
४९ वर्षीया तब्बूले एक भारतीय पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनिन्, ‘अजय र म कलेजदेखि चिनजानमा छौँ, उनी कुनै समय नजिकका साथी हुने गर्दथे, म सानी छँदा अजय र उनका कज’न समीर आर्यले मलाई गहिरो नजरले हेर्दथे, दुवै जना बद’मास थिए ।’
अजयले आफ्नी खास साथी तब्बू’को विहे होस् भन्ने चाहेका छन् । तर तब्बू पहिले देखि नै भन्ने गर्थिन् ‘मेरो लागि राम्रो केटा खोज ।’ यो सवै मजाक मजाकमा भनेको बताए पनि तब्बूले आफूहरू निकै नजिकका साथी भएको बताएकी छिन् । पहिलो पटक सन् १९९४ मा विज’यपथ चलचित्रमा दुवैले स्क्रिन सेयर गरेका थिए ।
केटा सा’थीहरूमा सबैभन्दा नजिक अजय नै रहेको उल्लेख गर्दै तब्बूले अजय निकै प्रो’टे’क्टिभ रहेको बताइन् । ‘अजय धेरै प्रोटे’कटिभ भएर नै मेरो लभ अन्यसँग परेको छैन’ तब्बूले अन्तरर्वार्तामा भनिन् । उनले ठट्यौ’ली शैलीमा अजय र उनका साथीहरूको कारण आफूलाई कुनै केटाले प्रपोज समेत गर्ने आ’ट नग’रेको बताइन् ।
‘अजय पहिले देखि नै यस्तै थिए, उनलाई देख्ने कलेजमा समेत डरा’उथे’ तब्बू भन्छिन्, ‘अब भन्नुस मैले कसरी प्रेम गर्न सक्थे । ‘तब्बूले अजयसँग हिक’कत, तक्ष’क र दृ’श्यममा काम गरेकी थिइन् । यो पनि पढनुस, यता हाँस्य कलाकार मनाेज गजुरेलले दाेस्राे बिवाह गरेका छन् ।
उनले न्या’य सेवाकी अधिकृत मञ्जु पोखरेलसँग आज (सोमबार) भक्तपुरको डोलेश्वर महादेवको मन्दिरमा बिवाह गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् बिवाहका तस्वीरहरू सार्वजनिक गर्दै मनाेजले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।आफ्नो दोस्रो बिवाहबारे जानकारी गराउँदै मनाेजले लेखेका छन् : आफन्त, साथी तथा शुभचिन्तकहरुमा सुखद जानकारी !जीवन सधैँ सरल रेखामा नहिँड्ने रहेछ । मेरो लामो वैवाहिक जीवन ४ बर्ष पहिले का’नुनीरुपमा टुंगि’एको कुरा यहाँहरुलाई वि’दितै छ ।
त्यसयता म मेरा छोरा र छोरीको एकल अभिभावक भएर बसिरहेको जानकारी पनि जगजाहेर नैतिकताको छ ।जीवनयात्राको दौरानमा आत्मीय साथको आवश्यकता महशुस हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैगरी मेरा बाबु-नानीको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यको बारेमा सं’वेदन शिल हुनुपनि जरुरी थियो ।यी दुबै अवस्थामा साथदिने सहयात्रीको अभाव समयक्रममा ख’ड्किँ’दै आयो । बाबुनानीको आग्रह पनि यस्तै आउन थाल्यो ।यसै क्रममा नेपाल सरकारको न्याय सेवाकी अधिकृत मन्जु पोखरेलजीसँग मेरो चिनजान हुनपुग्यो । विस्तारै हाम्रो घनि’ष्टता बढ्न थाल्यो ।
एकै खालको परिबेश र उस्तै खालको भोगा’ईबाट गुज्रि’एका हामी अन्ततः सहया’त्रा गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ । एक अर्काका जिम्मेवारीलाई साझा जिम्मेवारी मानेर पूरा गर्ने बाचा गर्याैं ।अगाडि आईपर्ने सु:ख/दु :खलाई मिलेर स्वीकार र प्रति’कार गर्ने संकल्प लियाैँ । हामीलाई यो निर्णयमा पुग्न हाम्रा बाबुनानीहरुको सुझाव र सहमतीले पनि ठूलो मद्दत गर्यो ।
सम्पुर्ण मिडियाकर्मी साथीहरुलाई सा’दर अनु’रोध छ- कृपया मेरो व्यक्तिगत जीवनका बारेमा का’ल्पनिक समाचार नलेखिदिनुहोला । मन्जुजीको इ’ज्जत र प्रतिष्ठा’मा आँच आउने अ’मर्या’दित कथा नकथि’दिनुहोला । हाम्रा सन्तानको सुख र शान्तीका लागी परपीड’क ट्रोल र भिडियो नबनाईदिनु होला !
कसैको निजी जीवनका बारेमा कपो’कल्पित समाचार बनाउने, अस’म्बन्धित मान्छेसँग नाम जाेड्ने, हाम्रो विग’तको जीवन, वर्तमानको विवाह तथा भविस्यको योजनाका बारेमा अनुमान कारिता नगर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु । त्यसैगरी हाम्रो नितान्त व्यक्तिगत मामिलाका बारेमा अनावश्यक सामग्री बनाउने कानु’नी, व्यवहा’रिक र सामाजिक अनुमति कसैलाई नभएको कुरापनि जोड’दार रुपमा जाहेर गर्दछु ।
विगतका अरा’जक अन्तर्वार्ता, असामाजिक क्रियाकलाप तथा अ’भद्र व्य’वहारका कारण म र मेरा छोराछोरीले ठूलो आ’घातबाट गु’ज्रनु परेको छ । त्यस्ता क्रियाकलापलाई स्थान दिने, उचाल्ने र गि’जोल्ने यु’ट्युब, अनलाइन समाचार, टिकटक लगायत संजालका प्रयोगकर्ताहरुलाई पनि भ’द्र सुझाव छ- कृपया एउटा जिम्मेवार अभिभावक भएर बोल्ने र लेख्ने गर्नुहोला ।सामाजिक सन्जालको ‘दुरु’पयोगले आफू र आफ्ना सन्तानलाई पार्न सक्ने ‘गं’भिर अ’सरलाई पनि महशुस गर्नुहोला ।अन्त्यमा, पुनः सम्पुर्णं आफन्त, साथी तथा शुभ चिन्तकहरुलाई यो सुखद जानकारी गराउछौँ कि हामीले आज मिति २०७८ साल असोज २५ गते सोमबार बिहान डोलेश्वर महादेवकाे दर्शन गर्यौँ ।
त्यसपछि परिवारको उपस्थितिमा त्यहीँ विवाह सम्पन्न गर्यौँ । अनि, सपरिवार मानवसेवा आश्रम (कौशलटार)मा रहेका बुवाआमालाई खाना खुवाएर/खाएर विवाह सम्पन्न गरेकाछौँ । परिस्थिति सिर्जित हाम्रो यो नयाँ अध्यायलाई शुभकामना र आशिर्वाद प्रदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद नवदुर्गा भवानीले सबैको रक्षा गरुन् । बडादशैँकाे हार्दिक शुभकामना । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevजसले १४ वर्ष पहिले बचाएका थिए उनैको काखमा चर्चित माउन्टेन गुरिल्ला नदाकासीको मृ’त्यु !
nextआज घट्यो सुनको मूल्य, प्रतिताेला कति ?